Ezine Uhlobo, mhlawumbe ngokumangalisayo, njalo fashion. Ngaphezu kwalokho, le kwekhanda uvuma kuphela Amathrendi newfangled. Futhi kunezinhlobonhlobo: isikwele emlenzeni, etshekile, oblong, bob-bob nge esiphongweni kanye izinto. On naphakathi obuphelele izinwele izinzipho idatha bheka stylish kakhulu, ngakho abesifazane abaningi beza salon, ubacela ukuba alenze le kwekhanda. Ngaphezu kwalokho, ngenxa yokuthi ezinye izinkanyezi show ibhizinisi ngokukhetha bob nge esiphongweni, kwekhanda isikwele noma efanayo, imfashini ayizange ithuthuke iminyaka engaphezu kwamashumi amahlanu.
Yini isikwele ukukhetha?
Ubuhle baleli kwekhanda wukuthi ungakwazi sithathe isigwebo sakho siqu, kungakhathaliseki ukuthi ubude izinwele, futhi ngesisekelo uhlobo izici zobuso. Ukuze ubuso kancane side nge ebunzini high kwekhanda kangcono enezinwele ezinde ngezansi kwesilevu futhi esiphongweni obukhulu ngqo. Haircut bob-bob nge esiphongweni ngeke zibukeke unciphise le okusaqanda ubuso. abesifazane Chubby kudingeka ukhethe bob iziqu. Uma une nentamo ende, ungayifihla ngokukhetha i izinwele side phansi emahlombe ke. Ngo cheekbones ebanzi bushelelezi yabo ezibukwayo wayegunda ke kufanele abunjwe njengendlela ibhola. I amathiphu izinwele kungenziwa zihambisana ngaphakathi, ngenxa izici umuntu sashintsha. Ubude elikhulu kwekhanda anjalo kufanele kube kancane ngaphansi komugqa kwesilevu. Abesifazane kanye ingxenye omkhulu engezansi ebusweni, ngeke ukwazi ukukhetha i-bob iDemo. kwekhanda labo kumele side - ngakho ukufeza ukunqandwa e izici zobuso.
cheekbones Angular utawufaka i square side nge iziqu. Futhi abesifazane nasenkathini sivuselele futhi rejuvenate ubuso, udinga ukukhetha bob iziqu nge izinwele kancane side, endaweni ethile nehlombe umugqa. Ukuhluka lokhu kwekhanda empeleni okuningi. Ezinye ongakhetha afaneleka abantu elilodwa noma amabili kuphela. Lapha ahlelwe ethandwa kakhulu.
Isitayela kanjani le kwekhanda?
Haircut bob-bob nge esiphongweni ngamabomu uya emfashinini. Kuyinto ezihlukahlukene, ukuthi ikufanele cishe kunoma iyiphi ukufakwa. Kusukela evamile kwekhanda kwansuku Kulula kakhulu ukwenza nenhle kusihlwa kwekhanda. mousse Enough izinwele qondanisa kubo. izintokazi Chubby zibukeke ukunciphisa umuntu, kufanele zisetshenziswe amathiphu Foam. Kodwa abesifazane ne okusaqanda ubuso uhlobo elula isitayela izinwele zakho ngosizo a rectifier nokunyakanyakaza isandla phehla izinwele zakhe. Ugunda bob-bob nge esiphongweni, okuyinto kukhethwe izintokazi ewumngcingo abangenangqondo, wabeka kanje. Kufanele zisetshenziswe ukumanzisa izinwele kanye Foam iphele izinwele whisking izandla - ujike ivolumu kwekhanda zokunganaki. Lapho side ilungiswe izinwele obuphelele amaphakathi, ungazama ukwenza curls ngomusa, etholakala kokubili ekhanda in kungekho oda esithile. Ungase futhi izame kudabuke noma scarves, iboshelwe ezinweleni zakhe ngendlela Ponytail encane. Lokhu kwekhanda ubukeka original kakhulu futhi engavamile. Kunoma ikuphi, qaphela ukuthi ukugunda izinwele bob-bob nge esiphongweni, letihlungiwe noma bob azilingani ukulingana kalula kakhulu. Futhi nje, kodwa kusheshe futhi kube lula!
Gelatin imaski ngoba izinwele nokubuyiselwa.
Izinwele Umbala Henna
Uwoyela Izinwele of ikhumini elimnyama: Izibuyekezo
Idayimane elikhulu - "Cullinan"
Okra: ukutshalwa kanye nokugcinwa
Indlela "MSC" isisindo ukulahlekelwa futhi ukuthi ukukwenza